मेरो सूचीमा पहिलो 10 पेरिस गर्न सर्वश्रेष्ठ फ्री कुराहरू छ Musée Carnavalet. यो संग्रहालय नवीकरण लागि वर्ष को एक जोडी को लागि बन्द गरिएको छ, तथापि, यसलाई आधिकारिक डिसेम्बर मा पुन: खोल्ने छ, 20th 2019! को मा स्थित ऐतिहासिक छिमेक Marais को, को Carnavalet संग्रहालय पेरिस को इतिहास समर्पित छ. यसको मूल देखि आजकल गर्न.
को आगन्तुक शहर सम्बन्धित भव्य संग्रह पत्ता लगाउन सक्षम हुनेछ. Gallo रोमन र मध्ययुगीन वस्तुहरु र संग्रह बाट. चित्रहरू धेरै किसिमका गर्न फ्रान्सेली क्रान्ति देखि सम्झनाहरु, मूर्तिहरु, फर्नीचर, र कला वस्तुहरू समय को फरक अवधि!
दुवै सांस्कृतिक र व्यक्तिगत आफैलाई समृद्ध तपाईं पेरिस र प्रेम शहर प्रेम भने, तपाईं म्यूज कर्नाभले राम्ररी आनन्द लिनुहुनेछटी! तपाईं आफ्नो बहुमूल्य संग्रह द्वारा चकित हुनेछ, यसको वास्तुकला, र वातावरण, जुन पेरिसको यती विशिष्ट हुन्छ!
यो सिर्फ मलाई छ, वा हरेक समय कसैले Notre Dame उल्लेख, म सिर्फ Notre Dame को विक्टर ह्यूगो अविस्मरणीय Hunchback विचार? तपाईं चलचित्र प्रेम वा छैन कि, यो गिर्जाघर यात्रा एक छ. मात्र यो एक badass मध्ययुगीन क्याथोलिक गिर्जाघर छ, तर यो पनि फ्रान्सेली गोथिक वास्तुकला को उत्कृष्ट उदाहरण हो!
को दाग गिलास Windows (खासकर गुलाब विन्डो), buttresses र मूर्तिहरु उडान जस्तै वास्तुकला विवरण को प्रयोग यो अवश्य-हेर्न निःशुल्क पेरिस अनुभव बनाउन. को गिरजाघर सबै भन्दा राम्रो फोटो मौका पेरिस को एक चरा-आँखा दृश्य लागि घण्टी टावर चढ्नु. तेसका लागि कैथेड्रल को दृश्य आफै, वर्ग जीन XXIII सुन्दर स्मारक को एक पछाडिको दृश्य लिन राम्रो सहूलियत बिन्दु प्रदान. सबै भन्दा राम्रो? यसमा हाम्रो 10 निःशुल्क कुराहरू पेरिस गर्न. किन? तपाईंले यसलाई अंदाजा. यो निःशुल्क छ!
यो सुन्दर भवन मूल एक रूपमा बनाइएको थियो उपासनाको स्थान. तथापि, आजकल यो एक समाधि रूपान्तरित गरिएको छ. यो धेरै उल्लेखनीय Parisians को रहलपहल धारण; विजेता ह्यूगो, मेरी क्युरी, नाम तर केही गर्न Alexandre Dumas! पन्थियनको आइकोनिक सिल्हूट र गुम्बज मोन्ट्याग्ने सेन्टे जिनेभिवको शीर्षमा बचे, ल्याटिन क्वार्टर को ऐतिहासिक पहाडी.
पनि नजिक Topping मेरो फ्री कुराहरू पेरिस लागि निःशुल्क सूचीमा गर्न. नहर सेन्ट मार्टिन को लम्बाइ हिड्ने! मेरो मनपर्ने यस रहलपहल यस शहर मा हिँड्छ. एक मानिसले बनाएको waterway, को नहर बारेमा छ 4.5 मी लामो, को Seine गर्न नहर डे एल Ourcq जडान. मूलतः निर्माण 1802 नेपोलियन द्वारा Ourcq नदी को एक outthrust को रूप मा, Parisians गर्न पीने खानेपानी ल्याउन खेलकुद हैजा र झाडापखाला जस्ता सम्भावित रोग संग riddled.
हरेक पन्ध्र वर्ष या त नहर यसलाई सफा गर्न dredged छ तर हाल पटक मा भएको नहर वरपरका नै क्षेत्र भइरहेको revitalization छ. को नहर साथ पबहरूमा र बारहरू प्रसार को एक hive फेला. यो क्षेत्र पनि विद्यार्थी जनसंख्या को एक लोकप्रिय hangout हो. लोकप्रिय संस्कृति मा, को नहर क्षेत्र सिनेमा मा विशेष थियो एमिली पत्थर छोड्न एक स्थानको रूपमा.
अर्को सुपर प्रसिद्ध यात्रा गर्न स्थान छ, को पाठ्यक्रम, मुक्त! एक विजयी आर्क, तीतस को रोमन आर्क प्रेरित, यो स्मारक फ्रान्सेली क्रान्तिकारी युद्ध र Napoleonic वार्स मा लडे जो फ्रान्सेली nationalists जीवनमा commemorates. चाप मुनि महान् युद्ध को अज्ञात सैनिक को चिहान निहित र सन्धि दिन देखि जल गरिएको अनन्त ज्वाला द्वारा चिनो लगाइएको छ 1921. छवटा धेरै महत्त्वपूर्ण राहतहरु अनुहार सजाय प्रत्येक क्रान्तिकारी र नेपोलियन युद्धहरु को प्रमुख क्षणहरु चित्रण. तिनीहरूले सामान्य Marceau गरेको दफन समावेश, Austerlitz को लडाई, Arcole, Jemappes, र Aboukir, र अलेक्जेन्ड्रिया को पतन.
यो मूल Chartres को ड्यूक द्वारा प्राप्त भएको थियो कि एक सार्वजनिक पार्क छ. उहाँले राजा लुई xvi को भान्जा छ. पार्क लुइस Carmontelle द्वारा एक अंग्रेजी बगैचा सदृश डिजाइन भएको थियो. त्यहाँ बगैचा ग्रेस धेरै हडताली वास्तु सुविधाहरू छन्. तिनीहरूले मुख्य पार्क गेट मा एक सानो rotunda समावेश, एक लघु पुरातन मिश्री पिरामिड, रोमी colonnade, एक चिनियाँ फोर्ट, एक डच पवन चक्की, र संसार भर बाट अन्य जिज्ञासाहरु. पार्क गएर सबै लघु मा संसारको सांस्कृतिक चमत्कार भ्रमण जस्तै छ.
के तपाईं संसारको शैली राजधानीमा नयाँ र के हुँदैछ भनेर पत्ता लगाउन उत्सुक हुनुहुन्छ?? त्यसपछि Galeries La Fayette मा आयोजित निःशुल्क फैशन शो को उपस्थित एक मौका नगुमाउनुहोस्, प्रत्येक शुक्रवार3बजे. तपाईं आफ्नो आरक्षण अनलाइन बनाउन बनाउन, अग्रिम आवश्यक मितिमा उपलब्धता सुनिश्चित गर्न. पनि, अर्को उत्कृष्ट मुक्त गतिविधि, को Galeries La Fayette तपाईं भने, पेरिस को सबै भन्दा राम्रो दृश्य को एक लागि छत छत भ्रमण गर्न छ. केही विन्डो के किनमेल मा त्यसपछि किनमेल नै आर्केड, तपाईं अतिरिक्त समय छ भने.
पेरिस गर्न फ्री कुराहरू यस छानिने छ सबै वर्ष लामो, तर तपाईं जुलाई र अगस्ट महिनाहरूमा खुला एयर सिनेमा आनन्द लिन सक्नुहुनेछ (आइतबार बिहीबार) मा शहर सबैभन्दा ठूलो पार्क को एक. को प्रदर्शनहरू थप समकालीन चलचित्र गर्न क्लासिक सिनेमा देखि भिन्न. एक डेक कुर्सी बुक र यो गाढा हुन्छ रूपमा बित्तिकै केही चलचित्र आनन्द लागि तयार हुन.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “10 निःशुल्क कुराहरू के मा पेरिस” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/free-things-paris/?lang=ne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
europetravel freeparis पेरिससिटी parisfree paristips Tranride रेल यात्रा